पुरानो फोन नफाल्नुस् , त्यसमा सुन हुन्छ ! - Tamang Online
काठमाडौं। स्मार्टफोनको क्रेज लगातार बढिरहेको छ ।अहिले अवस्था यस्तोसम्म भइसकेको छ कि मानिसहरु सामान्य समस्यामै पुरानो फोन छाडेर नयाँ फोन लिन्छन् । नयाँ फोन किनेपछि हामीले पुरानो फोनलाई कतै थन्क्याएर बिर्सिन्छौं । तर के तपाइँलाई थाहा छ ? जुन स्मार्टफोनलाई तपाइँ बेकार सम्झेर थन्क्याउनुहुन्छ त्यसमा सुन हुन्छ ।
« इराकमा सिन्धुपाल्चोकका दावा लामा तामाङको निधन (Previous News)
(Next News) नायिका हुदै निर्माता यसरी भए – पूर्णिमा लामा तामाङ »